Nnwom 115 AKCB - 诗篇 115 CCB
1Ɛnyɛ yɛn, Awurade, ɛnyɛ yɛn,
na wo din na anuonyam nka,
wʼadɔe ne wo nokwaredi nti.
2Adɛn nti na aman no bisa se,
“Wɔn Nyankopɔn wɔ he?”
3Yɛn Nyankopɔn wɔ ɔsoro;
nea ɔpɛ biara na ɔyɛ.
4Nanso wɔn ahoni yɛ dwetɛ ne sikakɔkɔɔ a
wɔde onipa nsa na ayɛ.
5Wɔwɔ ano, nanso wontumi nkasa;
wɔwɔ ani, nanso wonhu ade.
6Wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm;
wɔwɔ hwene, nanso wɔnte hua.
7Wɔwɔ nsa, nanso wɔnte nka;
wɔwɔ anan, nanso wɔnnantew.
Wontumi mma nnyigyei bi mfi wɔn mene mu.
8Wɔn a wɔyɛɛ ahoni no bɛyɛ sɛ wɔn ara,
9Mo Israelfo nyinaa, momfa mo ho nto Awurade so,
ɔyɛ mo boafo ne kyɛm.
10Ao Aaronfi, momfa mo ho nto Awurade so,
11Mo a musuro no, momfa mo ho nto Awurade so,
12Awurade kae yɛn na obehyira yɛn:
13Obehyira wɔn a wosuro Awurade,
nketewa ne akɛse nyinaa.
14Awurade mma wʼase nnɔ,
wo ne wo mma.
15Awurade nhyira wo,
ɔsoro ne asase Yɛfo no.
16Ɔsorosoro tɔnn yɛ Awurade de,
nanso asase de, ɔde ama onipa.
17Ɛnyɛ awufo na wɔkamfo Awurade
wɔn a wɔkɔ fam dinn no.
18Yɛn na yɛma Awurade so
AKCB : Nnwom 115